Islaynta Culimadda ee Gayiga Soomaalidda |
Islaynta Culimadda ee Gayiga Soomaalidda
Waxay ahayd Su,aashayda qormaddu ka dhalatay Maxaa Cullimadda Soomaaliyeed in ay Isdillaan Gayaysiiyey? , kala fahan diinneed duwannaanshaha Collaaddi ka dhallato, ,sii badashadda firqooyin diineedka dalka Soomaaliya ee haatan marraysa in ay Isdilaan sida ay isugu eeddeeyeen dilki loo gaystay labbaddi Sheekh ee Sheekh Axmed iyo Sheekh Cabdulqaadir Waloow aysan Sheegan kooxda lagu eedeeyay ee Al shabaab .
Soo jireennimadda gayiga Soomaaliya ee Cullimo islaysaa Xillimuu soo Billoowday ? Maxaa isu soo dhowaansho u diiddey Cullimadda Soomaalliyeed maddaama dadka dalka Soomaalliya xaalad dhibaato muddo rubuc qarni ah ay dugsannayaan ?Maxay salka ku haysaa In arrintu Isdillid gaarto?
Kala fahan duwannaanshaha fahanka Diinta ee Cullimadda Soomaaliyeed kooxiba fahankeedda ku dhagsan tahay Waxay qayb ka tahay dhibaatadda Dalka Soomaaliya , Dabcan waa Caalami kala fahan duwanansha Culimadda Muslimiinta ee Caalamka ku nool in ay Macnayaan kala duwan saaraan Aayaddaha iyo Axaadiista iyaga oo Wacyiga la joogo aragtiyo kala duwan ku kala eegaaya .
Tusaalle Qofki dawladda Soomaalliya Gollayaasheedda kala duwan ka qayb noqdaa Al Shabaab way dillaan qaybtood , Halka Culimo kale qabaan in aan la dili karin , Koox diineed kale oo Soomaalliyeed waxayba Qabaan in Al shabaabta la dagaalankoodda loo soo kaxaysto Gaallo, Ka mid noqoshadda Dawladda , La macaamilka Caalamka Gaalladda , Xalka Dalka Soomaalliya Iyo kuwo kale waa ku kala aragti duwan yihiin , Waxay soo daliishan Aayaddo iyo Axaadiis ay fahankoodda Saaraan , dhinacyadda kala duwan ee Culimo diineedka Soomaalliyeed .
Su,aallahaas sare iyo kuw kale oo baddan oo Culimadda horyaal ayaa dhankayga ah Balse inta aannaan iswaydiimaha Soo gudbin aan dib taariikhda Baalasheeddi hore u rogo aan doondoonitaankayga arrinta Culimo islaynta Soomaaliya Biloowgeedda soo qabto waa halkaan haleelay in aan taariikhda ogaadee .
Taariikhdda Islaynta Culimadda Soomaaliya
Baardheere Sheekh Cabdiraxmaan Aun iyo Sheekh Ibraahim Aun :Aqrinteey Xilli ku taariikhaysan 1840-TM ,Waxay ahayd kolki ugu horeeyey ee Culimaa,udiin Soomaaliyeed lagu dillo dhulka Soomaaliya dilkaas oo ay gaysteen Shiyuukh iyo Suldaano kale oo Soomaaliyeed .
Sida aan Taariikhda ka dheehdey Waxaa ka soo shaacbaxay Magaaladda Baardheere laba Sheekh oo la kala oran jirey Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Ibraahim , Waxay Culimaddaasu dadka Soomaaliyeed ugu yeereen in ay Shareecadda Islaamka isku xakunkeedda qaataan isla markaana waxay abaabuleen ciidamo urursi si ay aragtiddooda ugu fidiyaan guud ahaad gayiga Soomaaliya .
Muddo ka dib waxa ay yeesheen awood ciidan waxayna qabsaddeen deegaanno ka durugsan halka ay ka aassaaseen isbadalka .
Waxaa Dulaan ka hortagid ah ku soo qaaday Sheekh Madoow Mahad macalin oo Koox odayeedka (Qabiilka) Hintire xakumaayey iyo Suldaanki Koox odayeedka Galaddi Suldaan Yusuf Maxamed iyaga oo wata Ciidamo awood badan ayay dagaalka ku qaaddeen Culimaddaas Baardheere aragtiddooda Diineed ka abuureey isla markaana Isfidinaayey .
Waxaa dagaalki ku guulaysatay dhinici Sheekh Madoow Mahad Macalin iyo Suldaan Yusuf Maxamed waxay dagaalki ku dilleen labaddi Sheekh ee Isbadal doonka ahaa .
Dilkii Sheekh Uways Aun ee Daraawiish :Sayid Muxammed Cabdulle Xassan Amiirki Daraawiisheed ayaa ka dib marki uu ku soo laabtey Soomaaliya ee uu ka soo dagey Barbar Waxa uu dalka Keeney Dariiqo Diimeed Islaam oo ku cusbayd gayiga Soomaalidda Dariiqadda Saalixiyadda , Sayid Muxammed iyo Culimo ka tirsan Dariiqadda Qaadiriyadda ee ku dhaqnaa dhulka Waqooyiga Soomaaliya ayaa iska soo horjeestey waxayna ku tilmaamen Dariiqadda uu Sayidku wadey mid aan Gayiga Soomaaliya looga baahnayn .
Sayidku waxa uu kaga duwanaa Dariiqooyinka kale isaga oo ahaa mid Jihaad Iclaamiyey ,Jihaadkaas oo ka dhan ahaa Ingiriiski haystey Dhulka Soomaalidda intiisa badan .
Aan ku soo daadagee Daraawiishti Sayid Muxammed aassaasey ee dhowr iyo labbaatanka Sanno dagaalka Wadey waxay noqdeen kooxdi labaad ee dilla Sheekh Caalim ah oo gayiga Soomaaliyana laga wada yaqaano, Sheekh Uways ayay Daraawiishi ku dishey deegaan la yiraahdo Biyooleey 1905-TM .
In Darawiishi Sheekh Uways dishey waxaa Sugaaya Sayidka oo gabey ku digasho ah ka mariyey Dilki Sheekh Uways ee Kooxda uu Hoggaamiyaa dishey .
Doqonbaan ogayn Suudiyoow dahaya naareede
Waxuu dookhaneeyoo Xumaan Dali la meeraaba
Dambiguu Falaayaa Uways loogu dowgalaye
Candho dogoble goortaan Dillaa Roobku noo da,aye.
Dabkuu shideyey Aw Aadam waa diinta Nabigiiye (NNKH)
Dambaabudhada lahabkii miyuu naxarka Deebeeyey
Daraawiishta Saalixiya waa oog aan damahayne
Digrigiyo Ikhwaankii miyaa Eebbe Darajeeyey .
Daraawiishta Ustaad/Sayid MCxasan uu hoggaamin jirey waxay kala hor tagi jireen dadka ka soo horjeesta dagaal iyo dhac , Gabayahan Cali Dhuux Aadan oo Sayidka Ka soo horjeedi jirey, isaga oo ku eedaynaaya Sayidka iyo Daraawiishtiisaba in ay dillaan Culimadda ka soo horjeesata waliba si gaar ah Sayidka ugu tilmaamaaya in uusan kutubtiisa soo guran ee uu waranka qaato , Waxa uu yiri Cali Dhuux .
Ninkii Weligi diin-tii banaan Daacad ugu Sheega
Dariiqii Rasuulkii (Nnkh) ninkii diirka uga Qaada
Daw kalama soo baxo Cilmiye waala dirirraaye
Doofaaradduu Wadan jiruu dila yiraahdaaye
Iyaguna Markaasey ku didi diidi ma hayaane .
Aan ku hakano Dilka Sheekh Uways , Faaladda waxaynu kala soo baxaynaa Gabayga Sayidka ee digashadda ah , Daraawiishta Saalixiya waa oog aan damahayne Waxay Tusaalayn in Sheekh Uways uu ka soo horjeedday Sayidka iyo Daraawiishta uu hoggaamiyey isla markaana Sheekh Uways uu faafinaayey Fahan diineed ka duwan kan Sayidku Wado , Sababta Daraawiishi Sheekh Uways u dilleena ahayd in aan Saalixiyaddu dumin sida Sayidku Gabaygiisa ku muujiyey waxa ay ka qabeen Cabsi wayn Sheekh Uways Daraawiishta uu Sayidku Hoggaamiye .
Digrigiyo Ikhwaankii miyaa Eebbe Darajeeyey Dilka Daraawiish ee Sheekh Uways waxa uu Sayidku ku Tilmaamey in ay tahay Darajo Alle siiyey Diintiisa iyo Kooxda Walaalaha ah ee Daraawiish ee Jihaadka ku jirta , Ku Dheeraadayaa ….
Dilka Sheekh Axmed Aun iyo Sheekh Cabdulqaadir Aun: Waxaa lagu dilay Magaaladda Boosaaso Sheekh Axmed ,Dhalinyaro loo qabqabtey dilka Sheekha sida la soo bandhigey waxay sheegeen in ay Dilkaas wax ka qorsheeyeen kana qayb qaateen iyaga oo Sheegtey in ay Al shabaab ka tirsanaayeen , Sungaanteedda iyo Sungaan-la,aanshaheedda Alle kor ahaaye ayaa og .
Kooxda Al shabaab ma sheegan dilka Sheekh Axmed balse dadka badankiisu waa Soomaalidee waxay aminsan yihiin in Cadaynta Dhalinyaraddu tahay mid Sugan Al shabaabna ay ka suurogasho in ay dilkaas soo qorsheeyeen.
Isu Ekee ayaamuhu, Dilka Sheekh/Dr Axmed ,Haddii Alshabaab falkaas dilka ah leeyihiin waxay la mid noqon Dilki Uways ee Daraawiishi dishey , Diinta Alle danteedda ayaa ku jirtaa Diliinkiisa !
Waxaa lagu xigsiiyey Sheekh Cabdulqaadir Gacamey oo lagu diley Magaaladda Garowe , Waxaa la qabtey qofki diley , iyo dad kale oo la sheegay in ay ka qayb ahaayeen qorshaynta dilka Sheekh Cabdulqaadir , Kol kale iyo Al shabaab ayaa dishey Wad-aadki mise Sheekh oo waan ka daaya Wad-aad , Meel laga dhintey aadde, labaad ee dhulka Maamulka Puntland isku magacaabey ka arrimiyo lagu dilo .
Faalaynta Xaaladda Culimadda
Inta aanan u Galin Aan Xuso Culimadda dhexdooddu is-diley gayiga Soomaaliya in ay intaas ka badnaan karaan jirtaana , annigase ogaalkeey intaas ayuu noqdey , Sheeekh Bashiir, Sheekh Cayroow iyo Sheekh Cutayba iyaga Ingiriiska iyo Ameerikaanka ayaa dilay Sida la amin qabo , Wixi Qarsoon ee aadan sugi Karin Cadayn dhab ahna aadan u hayn Alle Kor ahaa ayaa og ku ekeeynteedda ayaa Mudan.
Haddaba Akhriye Aan sadex jameeco diimeed dalka Soomaaliya kuwa ka jira xilligaan ka mid ah aan soo qaato , Al shabaab , Ictisaam , Ahlu-suna waljameeca ,Al shabaab & Ahlu-suna waljameeca waa kuwo Awood ciidan leh oo dagaalama , Ictisaam waa jameeco aan hubaysnayn.
Waxaa hoggaamiya Culimo Muslimiin ah oo Soomaaliyeed haddana Xaalku waxa uu u joogaa aan is-dilo , Malaha dilka ayaa koox kasta fahankeeddu meel mar ku noqon, waa kuwa hubaysane, Miyaan ku adkeeyaa Culimadda Doodda , Adkayn kama fursato e aan ku sii socdo.
Al shabaab:Tijaabo kuma jirto in ay Diinta Islaamku xal tahay , Al shabaab , Kala barax-yeelidda diinta iyo Dawladnimaddu waa doonitaanka Cilmaaniyiinta Gaalleed , Doorna naguma leh , Dalkayaga annagaa leh , Diintayadda ayaan ku dhaqmaynaa dawladnimaddana ku suntanaynaa, Cidi ka hortimaaddana waa dillid soo duulle iyo dalka lahaaddeba , Waa doodda Al shabaab.
Haddaba Alshabaaboow Dillidda dalka lahaaddaha idinka aragtidda duwan ee Muslimka iyo Soomaaliga aad wadaagtaan Maxaad ku dilaysaan? , Ma doonitaankiina guulaysashaddiisa ayaa sidaas ku jira …. Saw aniga is-eegey waadiga haddaba Al shabaab taageersane maxaad dadka u tusaysaa , Armaad taageero ka kala dirtaa ? Mayee Waa qalad sixid , Waa saase ….
Al-shabaab muddo aan dheerayn ka hor dalkaan idinkaa Badankiisa ka talinaayey , Haddaba kolki aad dhahdeen Caruurta aan qarxiney ee wadarta u dhintey waxaan ka celinaynay Cilmaaniyadda ay soo Xambaarayaan, la idiinkama horayn , Xalka Qof Muslima oo Soomaaliyeed bidco ka badbaadintiisu dil ayuu idiin yahay miyaa? Hadday jirto Alle Oge Culimo dillitaana aad ku darteen dabcan Dadka Idinka aragtidda duwan Dil ayaad u haysaan si aad uga Gudubtaan, Maxaan ilaa maanta Difaacid idiin hayaa! , Caqiido ma ahan ee waa nabadda aad samayseen ee aad haatan Saqiiriseen …Sixiddi Jirtaayaa
Akhriyoow aan ku soo jitee Taageeradda al Shabaab ma ahan in aannan ka xumayn dilal Wadda-reedyadda ay Soomaaliddu u gaysanyaan , Bal haddana waxaan fogayn In Dhibaataddu dhasho dhibaato ka daran Tusaale Shabaab ayaa Caruur Soomaaliyeed qarxisey haddii ay dhasho Kenya Dalkeenna ha qaadato saw dhibaato tan Hore ka wayn ma ahan, Sidoo kale nabadda ka jirtey dhulka ay Al shabaab ka arrimin jireen /ka taliyaan ma kula quman tahay in burburin iyo qabyaallad ku soo celin lagu badallo…. Caqliga ku fakar ,Caadifaduna yaysan ku hoggaamin , Sixiddu Waa muhiimad wayn.
Al shabaabnimadda Mabda Hoggaankiisi cadoow ku yahay dheh , Sidee? Cilmaaniyaddaan ka caymin oo waan xasuuqi , Dadka Soomaaliyeed ayaan iska leyn diinta darajaynteedda ayaa sidaas ku jirta , Haddana in aan Guulaysto ayaan ku hamiyaa , Isa qabtaan Weeye , Saw Idinka sawirka xun isku sifeeyey . Kolkaasna uu dadki Qabyaaladdu dillootey ee dhimirka laa Gaal gayi kale jooga uma dhago raaricin warkiisa , Waad Carootey haye sidi Caddada ahayd ka dibna dhibaato ayaad samaysey mabda,a aad wadaan meel mar noqoshaddiisa Saw maydin maja xaabin.
Miyeysan Al shabaab Taariikhda Daraawiishti Soomaaliya ee SMCXassan dheehan , saw Daraawiishi dadka Soomaaliyeed iskama dili jirin , Maxaa u qabsoomey , Aan ahayn Xusid ah Gaaladda ayay ka soo horjeedeene , Malaha Intaas oo kali ah ayey Al shabaabkuna Rabaan.
Akhriyoow Dabcan halkaan kuma sheegaayo annigu in Al shabaab la burburiyo ee waa hala Saxo , Laga yaabee adigu in aad Al shabaab sabab la,aan neceb tahay , ogoow Al shabaab samaan iyo Xumaanba waa leeyihiin, bal adigu Qabyaalladda Siyaasaddaysan ee aad la nooshahay waa Tuurid dhex galidna ma leh .
Ahlu-suna waljameeca:Ahlu-suna waljameeca Soo qabo, Qabyaalad iyo Itoobiyaan kaalmaysasho ayay ku suntan yihiin , Al shabaabtu Qabuurahayagi ayay Qufteen ayay ku dooddaan , Sawir ah diinta iyo dawladnimaddu kala barxid mudan ayay leeyihiin,Ciidamadda Itoobiyaanka iyo iyagu waa iska dhinac dagaalamaan hal cadoowna waa wadda leeyihiin waa Al shabaabe ,Koox diineed Islaam Kirishtaana Kaalmaysatey ma siinaa Magacaas ,Akhristayaal Idinka weeye , Kuma dheeraanaayo Kooxdaan.
Ictisaam:Ictisaam Waa Jameeco aan Hubaysnayn Waxaa isku urursadey rag badan oo Culimo ah gayiga Soomaaliyana laga wada yaqaan , Waxay qabsadaan Shirar , Waxay soo saaraan bayaano leh , Dawladda Soomaaliya si cadaalad ah how shaqayso , Maamul goboleeddadu dhibaatooyinka ha xaliyeen , Kooxa diimeedyadda Hubaysi Hubka ha dhigeen waa Baaqyaddooda qaybo ka mid ah
Cajab ! Mahiga Qaybti Culimaddu dawladda ku lahayd ayaan ka rabaa , Saamigayaga yaan nala seejin , Madax dawladdeed la shirid ku darid, Dastuur maamul Goboleed ansixintiisa ka soo Muuqasho ,Madaxda Maamul qabyaalladeedyadda la showrid.
Aqoonsiga Dawladda Soomaaliya ay siiyeen Ictisaamku saw lama oran karo odayadda Ictisaamku waa kuwo Qabyaaladda la nool oo dawladda Soomaaliya ee Garashadda Saliimka ahi ay diidayso qaabka ay ku dhisanto ee 4.5 ah (afar dhan iyo mid dhiman) oo aan dhibaato ma ahane dheef laga dhowrayn.
Maamul Goboleeddo , Ma kuwa Qabyaaladda ku dhisan ee dhibaatadda Siyaasaddeed ee ugu wayn dalka Soomaaliya ah , Federaalka Qabyaaladdaysan , Odayadda Ictisaamku waa Koox odayeedsan-yihiin( Qabyaaladdaysan-yihiin) …. Ayaan-daro Soomaali haysata dheh .
Mahigoow hana qadin , Xakun doon aan xabad sidan ,kolkaas Al shabaabka waxay hubka uga dhigayaan waxay u arkaan in haddii ay xakunka Al shabaab qabsadaan iyagu aysan waxba helayn , Ahlu-Suna warkeeddaba daa oo Ictisaamka Al shabaab ayaa la raaciyaa kolka ay Meel sare soo qabsanayaan Ahlu-Sunna Waa Suufiyiin ayay wada dhahaan Kooxaha kale .
1: Maxaa isu soo dhowanashaha u diidey Culimadda Soomaaliyeed ?
2:Haddii Cilmaaniyad ka caymintiinu tahay Dil-waddareed sidee meel mar u noqon Qorshihiinu?
3:Mahigoow Hana qadin saw qadaf idinkuma ahan Sawir aan qumanayna idinka Bixin mayso?
4:Qabuurtaydi ayay iga qufteen ,waa in aan ajnabi Gaalleed u doontaa oon la dagaalamaa Ma diinta Nabi Muxammed NNKH Alle kor ahaaye ku soo dajiyey ayaa Culimo sidaas Qabta ?
Akhriyoow ayaamaheenna isu eki badanaa , Sooyaalkeenu Silic ku noolaansho soo jireen ah sugi ogaa . Soomaalidda Sooyaalku maxuu la bislayn waayey ? Waa su,aashaydda soo noqnoqta , miyaysan ka diiqadoon dariiqan ay soo qaadeen ee kol kasta isbadalka iyo mabaadii,du guul-daraystaan , Guuldaro waynaa , Guul-daraysiga, kuwa mabaadii,da Hoggaaminaayey hadday iyagu cadoow ku noqnee meel marki mabda saw Mushkilad ma ahan ? Hoggaamiye la,aan ayaa haysa dadka ku doodda ayaa halkaan dood difaaceed door leh ku helaaya .
Yaab! Ma sidi Sheekh Shariif (Wad-aadki laba waqti oo isku sawir ah mid yiri Jihaadda, midna Yiri Diinta Iyo dawladnimaddu door iskuma leh ) ayay Culimadda badankoodu doonayaan xilka hoggaaminta dalka , Haye , Ha doonneene ma aayaadkey dantoodda Hoggaamin doonid ku jaan goynayaan ? Xaqu waa ninka Xooga lihi sida uu u macneeyo isaga oo tiisa u danaynaaya , Culimadda Soomaalidda Diintu ma waxay u tahay ku Danayso oo dantaadda ku doon , Caalimku sida uu u macneeyo weeye Xaqu , Sax ,Sawtan haddaba ayaamo isku mid ah iyaga inna yiri laba dareen ayay kala leeyihiin. Akhriyoow tanu waxay iman Kolka maalinba aan maqalo Urur Diineed Cusub ayaa samaysmay , Waa jameeco Qunyar Socod ah , Waa koox Diineed Hubaysan , Waa Koox diineed Hoggaanka dalka Haysa oo Villa Somalia dagan ( Aalla Sheekh , Damul Jadiid ).
Si kooban u dhihid Nuxur, Heerka ay gaarsiisan yihiin Culimadda Soomaaliyeed waxaa gayeysiiyey ,Qabyaalladda iyo xakun doon, Qabyaaladda oo ah dareen ay dugsanayaan intoodda badan culimaddu, dadkayaga Caamadda ahna ay kala mid yihiin, , waxaan ka aminsanahay wax qaldan, waa Qabyaalladdee, kolka Qof dhintey wax loo dillo , Loo ooyo , loo dagaalamo Iwm , Haye oo Cullimaddu iyagu ma dareenkaas ayay la nool yihiin? , Haa , Sheekh Xassan Daahir Aways saw isagi lahaa , Koox odayeedkayga (Qabiilkayga ) Hubkoodda lama qaadan karo.
Xakun doon , In Culimaddu xakunka qabato cid kaga habooni ma jirto xaqna waa u leeyihiin , bal kolka ay fiqrooyin tiradda ka batey noqdaan , qaybtoodna waxay shalay qof caamo ah ku eedeeyeen maanta sameeya , Isdilaan , Dhahaan hala Burburiyo Tusaale Akhriyoow ,Culimadda Ictisaamka ee ku shirey Hargaysa waxay dhaheen Al shabaab Hubka ha dhigeen , waa hakala dareereen oo ha burbureen kolkaas Nabaddi Al shabaabku Kismaayo ka sameeyeen ee maanta laga qaaday oo Koox qabyaalladdeedka Raaskambooniyiintu haystaan, saw ma ahan haddii aanan xakunka helayn Kuwo kale oo Culimo ah xakun hellidoodda waa in aannan ogolaan , Kuwa aan nagu fikirka ahayn waa Kufaar (Khawaajir & Murtadiin ) , Cadkeeroow ku cuney ama ku ciideeyey , Halkaas ayay malaha ka shidaal qaataan Maahmaahdaas Garashadda aan Barbaarsanayn ka soo maaxatey .
Baahidda dadka Soomaaliyeed waa Cullimo isu soo dhowaata , Fahankoodda diineed ee Siyaasadda ku aaddan uusan ku dhaganaan dhinac kastiye meel ay uwadda jeediyaan Qorshaha Siyaasadda ee Soomaaliya , Ugu yaraan isku racaan dhabaha dadka Soomaaliyeed dhibaatadda looga saari karo .
Dhibaato kasti xal ayay leedahay , Fahankaaga in aad ku dhagsanaato Tanaasulna lagaa waayo, waa horseedka Guul-daradda……..Qalad kasti Sixid ayuu leeyahay , Sidee ku dhacay Qaladku waxaa ka door badan sidee ku saxmayaa dhibaatadda uu dhaliyeyna looga gudbi karaa …..